The Minnesota Equity Blueprint waa qorshe dhammaystiran, oo aan qayb ka ahayn, qorshe fog oo loogu talagalay barwaaqo la wadaago deegaan caafimaad qaba. Buluugga ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo isku xirnaanta dadka gobolka iyo gobollada, iyo sidoo kale isku xirnaanta u dhexeysa farqiga, caqabadaha, iyo xalalka qaabeynaya mustaqbalkeena.
Dukumentiga “il furan” waxaa iska kaashaday Koritaanka & Cadaaladda iyo OneMN.org oo la abuuray xubnaha ka mid ah Waxaa kobcay Shabakadda Naqshadeynta - Wadajir miyi iyo magaalaba (TBDN) Intii lagu jiray 18 bilood, TBDN waxay aruurisay fikradaha, caqabadaha, xallinta, iyo tusaalooyinka waxqabadka ee ka badan 300 oo reer Minnesota ah in ka badan dhowr iyo toban shirar oo gobolka ah, oo ay ku jiraan laba kulan oo gobolka oo dhan ah. Habka waxaa kale oo ku jiray soo-jeedin ka timid xirfadlayaal badan oo ka shaqeeya dawladda, waaxaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan macaash doonka ahayn. Kooxda baarista kobcinta & cadaalada waxay falanqeeyeen in kabadan 700 talooyin ah oo lagaheley shaqadan marxalada badan waxayna u weeciyeen 141 talooyin, ayagoo udhaxeeya istiraatiijiyad guud ilaa siyaasado gaar ah.
Buluugga loo qaabeeyey maahan oo keliya sharci dejinta ama go'aannada dowladda, laakiin waa kheyraad loogu talagalay shaqsiga iyo waxqabadka bulshada maxalliga ah. Sanduuqyada sheekada ee kujira dukumiintiga dukumiintiyada ugu wanaagsan ee gobolka iyo dadaallada dhiirigalinta leh ee lagu dhisayo dhaqaale isku dheeli tiran oo loo wada dhan yahay.